AMD (ATI) နှင့်ထာဝရပြproblemsနာများ Linux မှ
AMD (ATI) နှင့်၎င်း၏ထာဝရပြproblemsနာများ
ပန်ဒိုရာ | | ပုံစံ, GNU / Linux များ, NOTICIAS
ငါမှစ။ ကတည်းက Windows ကို7ငါ့ပထမ Linux ကို လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တာကံမကောင်းတာငါကဒ်ပြားတစ်ချောင်းနဲ့ကိုင်ရတယ် ATI (AMD ၏) တစ်စုံထက်ပိုသောခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ NVIDIA ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုတောင်မှ Intel က ဘက်ပေါင်းစုံ။
ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည် ယာဉ်မောင်း အခမဲ့ Radeon သူတို့ဟာ desktop ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက်သင့်တင့်လျောက်ပတ်ပါတယ်။ ငါလည်းသူတို့ laptop တစ်လုံးအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ယာဉ်မောင်း ကံမကောင်းစွာပဲ laptop အသုံးပြုသူများအတွက်ယာဉ်မောင်းများကိုသာအသုံးပြုနိုင်သည် Catalyst, ငါသူတို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် (မေလ 11.4) ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်အများကြီးအမျိုးသမီးတိုးတက်မှု၏ဖိနပ်၏ဖိနပ်သို့မရောက်ရသေးကတည်းကအများကြီးတိုးတက်လာသည် NVIDIA.
အသုံးပြုသူများသည် ATI ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်အထောက်အပံ့ကိုခံစားနိုင်အောင်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုသည်၊ ၎င်းသည်စကားလုံးများသာမကကတိများ၊ အချို့ကိုလိုချင်သည် ယာဉ်မောင်း CP ရုပ်ရှင်ကိုအလွန်အကျွံမတင်ပဲ HD ရုပ်ရှင်တပြိုင်နက်ဖွင့်ရန်၊ xvba-video library သည် vdpau ကဲ့သို့အသုံးပြုသူများကိုအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်စေလိုသည် NVIDIA, GPU အရှိန်မြှင့်တင်ရန်သင်တောင်းခံလွန်းလွန်းသည်၊ သင်၌သင်ခံစားနိုင်သည့်ထက်ဝက်မျှသာဖြစ်သော်လည်း Windows ကို.
ငါ့ရဲ့ရှက်စရာပဲ Radeon HD 4650 1GB ၏ပုံသည် ၁၀ ယူရိုဂရပ်ပုံနှင့်တူသည်။ တကယ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ ဤနှစ်အတွက်လာမည့်နှစ်အတွက်မျှော်လင့်သည်။ AMD ၏ ဘက်ထရီတွေကိုတပ်ဆင်ပြီး linuxers တွေအားလုံးကိုငါတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့ဂရပ်ဖစ်တွေကအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။
ကျွန်တော်ဝယ်မယ် Intel ကသင်သည်အဘယ်သို့ပြုလိမ့်မည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ပုံစံ » AMD (ATI) နှင့်၎င်း၏ထာဝရပြproblemsနာများ
အရာတစ်ခုမှာ၊ စာလုံးအကြီးခေါင်းစဉ်များကိုသတိထားပါ၊ နောက်တစ်ခါထပ်မံလျှော့ချပါ
ကောင်းပြီ၊ ဘာမှပြnoနာမရှိ၊ ငါ xD တည်းဖြတ်ပြီးပြီ။
ကျွန်တော့်ကိုဝယ်ပါ Intel ကိုဝယ်ရင်တော့ငါကဆင်းရဲတယ်။ ကံမကောင်းတာကငါ Hasefroch ကိုပစ်ရမယ်
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ၀ ယ်ယူမည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတစ်ချိန်တည်းဝယ်ယူရန်ငွေမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် Motherboard နှင့်သိုးထီးနှင့်လကုန်ပိုင်းတွင် Intel i5 ကိုဂရပ်ဖစ်ပါရှိသည်။
Ah ရဲစွမ်းသတ္တိ, pandev92 usa Chakra…ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးမှနောက်ထပ်တစ်ခု JUAS JUAS JUAS !!!
ငါဒီအခွင့်အလမ်းကိုယူပြီးသင့်ကိုကြိုဆိုပါတယ် ပန်ဒိုရာ ဆိုက်သို့😀
မင်းတို့ဒီမှာရှိနေတာကိုကျေနပ်ပါတယ်၊ ငါတို့ကပိုများနေပြီ။ ဒီကိစ္စနဲ့ငါတို့အားလုံးလေ့လာသင်ယူကြမယ်၊ အတွေ့အကြုံတွေရလာမယ်၊ သင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံးမျှော်လင့်မိတဲ့အခါငါတို့မျှော်လင့်ထားတာထက်ကျော်လွန်သွားမှာပါ။ 😉
ဟိုင်းဂါရာ။ Pandev ကိုလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ (ဘလော့ပေါ်ကဆောင်းပါးတွေမှတဆင့်) သူတို့ရဲ့ဗဟုသုတကိုမျှဝေချင်တဲ့လူတွေအများကြီး Desdelinux နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Pandev ။ မင်းရဲ့မေးခွန်းအတွက်အဖြေကိုလာမယ့်နှစ်မှာဂရပ်ဖစ်ကဒ်နဲ့အတူအကောင်းဆုံး Core i7 ကိုကျွန်တော်ဝယ်ချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အများကြီးသိမ်းရ ဦး မယ်။ ငါထိုက်တန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့ထင်တယ်၊ ငါကွန်ပျူတာမှာအချိန်အကြာကြီးရှိလိမ့်မယ်။ ဗီဒီယိုများဖန်တီးခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံလိုသော်လည်း၊ ၂၀၀၆ အောက်တိုဘာမှကျွန်ုပ်၏ Sony VAIO laptop သည်တိုင်းတာမှုမပြုခဲ့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တခြားအရာအားလုံးအတွက် Linux ကိုကျွန်တော်စတင်သုံးနှစ် ၂ နှစ်လုံးလုံးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အခုငါGüindous 2006 "starter" နဲ့ပါ ၀ င်တဲ့ mini-laptop ကနေစာရေးနေတာပဲ။
GNU / Linux ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် nvidia သည်ထိုအမည်ကိုထည့်ထားသည်။
ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့အားလုံး nvidia ahahah xD ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
နောက် ၅၄၅၀ (desktop) နဲ့ catalyst driver တို့နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါမှပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အပူချိန်သူတို့တန်းတူအထိမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသိသာဖြစ်ကြသည်ပေမယ့်။
ငါလက်ရှိဗားရှင်း 11.11 ကိုအသုံးပြုပါ။
မင်းမှာဘာပရိုဆက်ဆာလဲ? ငါ့မှာ amd turion x2 ရှိတယ်။ ဒီ core cores နှစ်ခုလုံးကို 100% မှာမြင်တယ်။ Windows မှာ vlc နဲ့ ၁% စားတယ်။
ငါ့မှာ Intel မှစနေပြီ။
ငါ fullhd ဗီဒီယိုကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြပြီး 50-70% မှာတတ်၏။ ဒါပေမယ့်ယာဉ်မောင်းတွေကကျွန်တော့်ကိုစိတ်မပျက်စေပါဘူး။ X-plane9ကိုဂရပ်ဖစ်သိပ်မများပေမယ့်အလုံအလောက်မကစားနိုင်အောင်လုံလောက်စွာထားပါ။
ငါဆောင်းပါးနှင့်အပြည့်အဝသဘောတူသည်။ ငါ Gnome-Shell ကိုစမ်းသပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဒါဟာလုံးဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယာဉ်မောင်းတွေကိုအခမဲ့လွှတ်လိုက်ပြီးကြက်ဥကြော်တစ်လုံးထဲကိုကြက်ဥကြော်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် Catalyst ကိုပြန်သွားပြီး Gnome-Shell ကနေမာရ်နတ်လိုထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ ATI သည် windows များမည်သို့ပြုမူသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော် Linux တွင်၎င်းသည်အလိုရှိရာများစွာကျန်ရှိနေသည်။
Ubuntu 10.10 ကို live cd ပေါ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်မကြာသေးမီက ၀ ယ်ယူခဲ့သောစျေးပေါ။ ၊ သူမှာ radeon 350 ပါ ၀ င်တဲ့ e6310 ပရိုဆက်ဆာနဲ့ကျွန်တော်စည်းလုံးမှုမထားဘူး။ အံ့အားသင့်စရာက Lubuntu သည် desktop ကိုတင်ခဲ့သည်။ ငါ့မှာ 945 chipset ရှိတဲ့ intel စက်တော်တော်များများရှိတယ်။ HD ရုပ်ရှင်တွေကို 720px အထိကြည့်နိုင်ရင် vlc နဲ့ပိတ်ပြီးအရာအားလုံးကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ငါအမြဲတမ်း 486px ၌ hd ကိုရှာဖွေလေ့ရှိပြီးအမှန်တရားသည်ကောင်းချီးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကတ်များအပြင် linux နှင့်တူညီမှုမရှိသောအစစ်အမှန်မီဒီယာ၏စီးပွားဖြစ်ကုဒ်နံပါတ်များနှင့်လည်းကျွန်ုပ်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။
ငါ၏အ xD laptop တွင်လည်း ATI ကိုငါတိုက်ထုတ်သည်။ ATI သည်ကျွန်ုပ်၏ကဒ်အတွက်အထောက်အပံ့ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုတော့သောကြောင့်သင်ထက် ပို၍ ဆိုးသည်။ ငါ Catalyst driver ကိုမသုံးနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့သူများနှင့်အတူသွားသည်၊ အမှန်မှာသူတို့တိုးတက်လာသည်။ ဒါပေမယ့်အလုပ်ရှိသေး၏။ လာမယ့် Kubuntu ဗားရှင်းအတွက်ကျွန်တော့် laptop ကဘာတွေ xP ပေါ်မှာမူတည်ပြီးလုပ်ဖို့နည်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်
ဒီအကျွမ်းတဝင်အသံ ... ။ ဟားဟား။
အိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Ati Radeon 9250 ... အဆိုးရွားဆုံး Ati သည် Linux အသုံးပြုသူများအတွက်ပြုလုပ်သည် ¬_¬
မည်သည့် distro ၏ဖိုရမ်ကိုမဆိုစစ်ဆေးပါ၊ Ati Radeon 9200 သည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည်ကိုသင်ဖတ်ပါလိမ့်မည်။
ငါ့မှာ Ati Radeon 9200 se ကွန်ပြူတာရှိတယ်။ ဒီဂရပ်ဖစ်အမျိုးအစားအတွက်တစ်စုံတစ်ယောက်က distro ကိုအကြံပေးနိုင်တယ်။ အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ကိုစားသုံးတဲ့ desktop environment တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (Xfce, lxde, ဒါမှမဟုတ် Openbox ၀ င်းဒိုး manager) ။
Fedora 17 မှာဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။